Tag: email ule | Martech Zone
Tag: email ule
Enwere ihe kpatara ọtụtụ ụlọ ọrụ na-eme atụmatụ itinyekwu oge na ego na ahịa email na 2016: ịre ahịa email na-aga n'ihu na-ejide ROI kachasị elu nke ọwa ahịa ahịa dijitalụ niile. Ndị ahịa ọ bụla nwere ọkacha mmasị ha na-eweta ọrụ email na nyocha nyocha email. Mana ọtụtụ mgbe, ha na-eleghara ihe dị mkpa nke mkpọsa ahụ anya: na-anwale ozi-e ha n'ofe ọtụtụ ngwaọrụ na ndị ahịa tupu ha etinye mkpọsa ahụ. Ọ bụ ezie na ọtụtụ ule na-akpọsa site na izipu ozi ịntanetị
Sunday, December 13, 2015 Satọde, Febụwarị 13, 2021 Douglas Karr
Ebe ọ bụ na ndị ọrụ mmekọrịta ọha na eze na-akụ anyị kwa ụbọchị, anyị ga-ahụ nke kachasị mma na njọ izipu ozi ịntanetị. Anyị ekenyela tupu otu esi ede ederede dị egwu na ozi ederede a bụ nnukwu ntinye na-etinye oke ọganiihu. Nke bụ eziokwu bụ na ụlọ ọrụ kwesịrị ịzụlite mmata na ikike maka akara ha n'ịntanetị. Ide ederede ede ezughi ezu, ikike ibido nnukwu ọdịnaya ma kesaa ya bụ
Kedu Elements Ele Kwesịrị Bele na Mgbasa Ozi Email Gị?
Fraịde, Septemba 25, 2015 Fraịde, Septemba 25, 2015 Douglas Karr
N'iji ntinye igbe ntinye anyị site na 250ok, anyị mere nnwale ọnwa ole na ole gara aga ebe anyị degharịrịrị isiokwu isiokwu ala anyị. Nsonaazụ dị ịtụnanya - ntinye igbe igbe anyị abawanye na 20% gafee ndepụta mkpụrụ anyị mepụtara. Nke bụ eziokwu bụ na nnwale email bara uru itinye ego ahụ - yana ọ bụ ngwaọrụ iji nyere gị aka iru ebe ahụ. Were ya na ị bụ ụlọ nyocha na-elekọta ma ị na-eme atụmatụ ịnwale ọtụtụ